कालो, निलो आकाश । मुसलधारे पानी । शिरदेखि पाऊसम्म निथ्रुक्क भिझेर लुगलुग काम्दै ऊ अवला बच्चा झै बाटोको छेऊमा उभिराखेकी छ । दिन ढल्दै जान्छ, साँझ छिप्पिदै जान्छ । घपलक्क ओढेको पछ्यौराको मुनिबाट ऊ देख्छे टाढाबाट कोही मान्छे अजङ्गको घोडामा उतिर दौडदै आउँछ । कालो घोडामा कालो लुगा लगाएको भिमकाय मान्छे । अहो कस्तो भयङ्कर उसको मुटु जोडले धड्कन्छ । त्यो मान्छे त हेर्दाहेर्दै ऊनेरै आयो । लौ उसले त उसको पाखुरामा च्याप्प समात्यो दुख्ने गरी र हुइँकायो आफूसँगै ।
ऊ होस्टेलमा आएको हप्तादिन भएको छ । ‘काठमाडाैं’ उसले मनमनै सोची ‘यस्तो पो रैछ ।’ उसलाई काठमाडौं देखेर खास अचम्म लागेन । जस्तो सोचकी थिई लगभग उस्तै । ठूलाठूला घर, धुलाम्मे बाटो, गाडीको आवाज अनि सिमीको झाङमा लाग्ने लाई किरा जस्ता बग्रेल्ती मान्छे । बरु बानेश्वर चोकमा एकहुल मान्छेसँगै मिसिएर ठेलमठेल गर्दै बाटो काट्दा भने उसलाई रमाइलो लाग्यो ।
बडेमानको डेक्चीमा चियाको लागि पानी बसाल्दै गर्दा उसले दिदीसँग भनी, 'मलाई त केई अनौठो लान काठमान्डू ।'
'तैले ठूला-ठूला बिल्डिङ्ग महल त देखेकै छैनस् ।' ग्याँसको लाइटर खाज्दै गरेकी दिदीले ऊ तिर पिठ्यू फर्काउँदै भनिन् -'ती महलाँ त लिफ्ट हुन्छ । सिँडी पनि आफै चल्छ । तँ त उभिए मात्र हुन्छ । म त एकचोटी सिँडीमा झन्नै लडेकी । कसो कसो अडिए नत्र त्यत्रा मान्छेका बिचाँ बेजेत हुनी नि ।'
होस्टेलमा उसलाई त्यती नरमाइलो लागिरहेको थिएन । ‘दिदी भएर होला ।’ त्यही दस-बाह्र जना मान्छे भाँडा पनि त्यति हुदैनथे । तराई मुलका केटाहरू ज्यादा थिए होस्टेलमा । पढ्न आएका । कोही इन्जिनियर कोही सिए। उसले यो सिए भनेको बुझेकी थिइन । पढ्न त दस कक्षासम्म पढेकी थिई । पहिलोचोटीमै सेकेण्ड भिडिजनमा एसएलसी पास पनि गरेकी थिई तर यो सिए उसले पहिला कतै सुनेकी थिइन । उसलाई ती तराई मूलका केटाहरू त्यती मन पर्दैनथे । ‘मधिसेहरू’ ऊ सोच्ने गर्थी ‘नेपालीमा पनि होइन, हिन्दीमा पनि होइन के हो भाषामा के के बोल्छन् के के ।’ खाना थप्न जाँदा उनीहरू हाँसे भने उसलाई लाग्थ्यो ती केटाहरू उसैलाई खिल्ली गरेर हाँसिरहेका छन् । बरु पहाडेमुलका केटाहरू जाती थिए । पोखरातिरका झापातिरका । मिठो बोल्थे उनीहरू ।
'त्यो किचन ।' सर भन्दै थिए । 'यहाँ राखेर खाना खाने' 'तातो पानी छ ? लुगा हप्तामा कति जोर धुन दिन पाइन्छ ?' ऊ साध्दै थियो । सर उत्तर दिदै थिए सकेसम्म कुरा मिलाएर 'वहाँ नै हो किचनको दिदी ?' भनेर उसले सरसँग सोध्दा उसलाई पहिलोचोटी देखी ।
लाम्चो अनुहार, कालो-कालो, गोरो गोरो, छड्के कपाल कोरेको, अग्लो अग्लो धेरै अग्लो पनि होइन, अलि अलि पुरानो फिलिमको हिरोजस्तो उसलाई त्यो केटा देख्ने बित्तिकै मनपर्‍याे ।
'दुई चार दिनमा आउँछु ।' उसले सरसँग भन्दै थियो । 'भोली नै आए हुन्थ्यो !' उसले मनमनै सोची र खित्तित हाँसी ।
'दिदी खाजा ।' उसले किचनतिर हेर्दै भन्यो । उसलाई खाजा लगेर दिन कस्तो कस्तो धक लाग्यो । दिदीले लगेर खाजा राखिदिइन् । उसले भित्र झ्याल खुसुक्क चियाइन् ।
'भाइ नयाँ हो ?' दिदीले सोधिन् ।
'अ आज आएको ।'
'भाइको घर कहाँ नि ?'
काँधबाट झरेको गलबन्धीको सप्को उठाउँदै उसले भन्यो 'पोखरा' उनलाई त्यो गलबन्धी विछट्ट मन पर्‍याे ।
'त्यो केटी साह्रै अल्छी छे ।'घरमा हुँदा दिदी बारम्बर उसँग कराउने गर्थिन् । 'यत्री भइसकी कपाल-सपाल कोर्न पनि मैले भनिराख्नु पर्छ । उमेराँ त अलिअलि नक्कल झक्कल पनि पार्नू पर्छ क्या । आमाचाँही उसलाई फ्याङ्ली भन्थिन् ।
'तिमी नै फ्याङ्ली' ऊ मुखमुखै लाग्थी ।
'राम्राको रुप त त्यसै देखिन्छ । नराम्राले जति नक्कल पारे नि त्यही हो ।'
हिजोआज भने उसलाई खुब ‘नक्कल पार्न’ मन लाग्ने भएको छ । गाजल त अलि अस्तिनै देखि लाउन थालेकी हो । कपाल पनि हिरोनीको झँै कैले यता झार्थी कैले उता ‘आल्ली चिटिक्क परेर हिडेको बेला ‘त्यो केटोले’ देखे नि हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्यो । उसले देख्ने बित्तिकै आएर ऐन हेर्थी । ऐनामा आफू राम्री देखिई भने उसको मन चङ्गाझै उचालिन्थ्यो । नराम्री देखिएँ जस्तो लाग्यो भने पछुतो मान्थी 'यस्तैबेला देख्न पर्नी ।'
'भान्छे दिदी ! ओ भान्छे दिदी !' एकदिन पल्लो कोठाका केटाहरू हल्ला मच्चाउँदै खाना खान आए । ‘मधिसेहरू’ उसले मनमनै सरापी । उसलाई यो भान्छे दिदी भनेको फिटिक्कै मन पर्दैन । कस्तो होच्याएजस्तो ।
'दिदी रिसाउनु भो क्या ?' अर्काे मधिसे केटाले भन्यो 'भाडाँ माझ्ने दिदी भन् न ।' सबैजना गलल्ल हाँसे ।
'खाना पकाउने दिदी हो कि भाडा माझ्ने दिदी हो तिमीहरूलाई कसरी थाहा छ ?' बाहिरबाट उसले रिसाएर जवाफ फर्काएको उसले सुनी । उसलाई राहत मिल्यो । जोडसँग धड्किरहेको मुटुलाई बलियो हातले च्याप्प समातेर अड्याएजस्तै लाग्यो । 'कति जाती मान्छे' उसले मनमनै भनी ।
'भाडा माझ्ने दिदीलाई भाँडा माझ्ने दिदी भन्दा तिम्लाई किन टाउको दुख्यो ?' उनीहरूले व्यङ्ग्य मिसाएर ठाडो उत्तर फर्काए । तर उसलाई थाहा थियो उसँग बोलेर जित्न कसैले पनि सक्दैन । कसरी उसले सरसँग एकचोटी विवाद पर्दा खरर्र पाँच मिनेट सम्म नन्स्टप बोलेको थियो र सरपनि चुप परेका थिए । उसको कुरा सकिने बितिकै सबैले उसको अनुहारमा ट्वाँ परेर हेरेका थिए । उसलाई भित्रभित्रै कति खुशी लागेको थियो त्यतिबेला ।
'हरेक मान्छेको आत्मसम्मान हुन्छ र सम्मान गर्नेले मात्र अरुको सम्मान पाउँछ ।' ऊ बोल्दै थियो बाहिर र उठेर हिड्यो । उसलाई त्यसै खुशी लाग्यो यतिबेला ।
ऊ उसँग त्यति बोलेकी थिइन । यसो भनौ बोल्न सकेकी थिइन । ऊ पनि खासै बोल्न खोज्दैनथ्यो तर एकदिन बार्दालीमा एक्लै घाम तापेर बसेको बेला झ्याप्प सोध्यो 'दिदी तपाईले कति क्लाससम्म पढ्नुभा’को छ नि ?'
'दससम्म उसले हड्बडाउँदै भनी र मनमनै सोचित 'थोरै त भएन ?'
'अनि कुन सालमा जन्मनुभएको नि ?'
'पचास सालमा ।'
'म पनि पचास सालमा' उसले मुस्कुराउँदै भन्यो 'कुन महिना ?'
'म त असार । बहिनी पो भन्नुपर्ने रै’छ ।' उ हाँस्यो ।
उनले के भनौँ के भनाँ भनेर भनि 'दिदी भनेपनि केही छैन ।'
दुई चारजना मधिसे केटाहरू भने उसलाई पछि पछि दिदीको चम्चे भन्थे तर उसको अगाडि चुप रहन्थे । खाजा बनाउँदै गर्दा उसले एकदिन सुनी 'त्यो सालेले भ्यायो होला यो दिदीलाई' यस्तो चिताउँदै नचिताएको कुरा सुनेपछि साह्रै नराम्रो लाग्यो उसलाई । हिड्दा हिड्दै ज्यान खस्न लागे जस्तो लाग्यो । ‘कतिसम्म नराम्रो चिताउँछन् मान्छेहरू’ उसको अगाडि बसेर जोडसँग रुन मनलाग्यो । उसलाई गएर सबै कुरा सुनाएर ती केटाहरूलाई लागी गराउन मन लाग्यो । त्यो राति ऊ खाना खान आएको गएको पनि वास्तै गरिन । खाना थप्न पनि दिदी गइन् । उसको मन भारी भइराख्यो । राति सुत्नेबेलामा सोची 'केटाको जात कतै उसले पनि यस्तै सोच्छ की'
'बिहानीपख देखेको सपना साँचो हुन्छ है' एकदिन उसले दिदीसँग सोधी ।
'भन्नेमात्रै हुन् क्या ।' दिदीले उसको कुरामा वास्तै नगरी भनी । ऊ खिस्रिक्क भई ।
नयाँ बर्षको भोलिपल्ट क्यालेण्डर फेर्दा दिदील्े भनिन् 'हामी आ’को पर्सी छ महिना हुन्छ ।'
'त्यसो भए जाने नै भयौ हैन त ?' सर भन्दै थिए ।
'अँ सर अब त जाने पर्‍याे नि ।'
'अनि अब आउन ?' सर सोध्दै थिए ?
'जेठको अठार गते इक्जाम छ क्यारे । पन्ध्र गते भित्र आउँछु होला सर ।'
'तरकारी थपिदे रे क्या ।' दिदी कराइन् । ऊ झस्केझै गरे तरकारी थप्न टेबुलतिर गई । त्यो टेबुलमा बस्थ्यो ।’ उसले मनमनै सोची । गह्रौ पाइला गरेर फर्की । थप्दा थप्दा एउटैेमा तीन चोटी थपिछ । धत् ।
'के हो दिदीलाई त आज केही कुच भएजस्तो छ नि ।' एउटा केटाले जिस्काउँदै भन्यो । उसलाई त्यो जिस्क्याएको मन परेन । सबै तरकारी त्यसैकोमा घोप्ट्याइ दिऊ जस्तो लाग्यो । चुप लागेर भाडाँ माझ्न गई । धारो खोली ठूलो गरेर । धाराको वेग भाडाँसँग ठोक्किएर आएको आवाज सुन्दा उसलाई रुन मन लागेर आयो । उसले अझै जोड जोडले झन् ठूलो धारा खोली ।
‘आज सत्र गते’ । उसले क्यालेण्डर हेरी । ‘उसले त पन्ध्र गते नै आउँछु भन्थ्यो होइन र ? ढिलो गर्यो त ? एक दुई दिन ढिलो त हुन सक्छ । आउने दिन मिलेन कि ? कि बिरामी पर्‍याे ? जाँच दिन आउने हो भन्थ्यो । जाँच दिन त ढिलो गर्नु भएन फेरि । कि आउँदैन ऊ ? अर्कै होस्टेलमा पो बस्यो कि के भर ? अर्कै होस्टलमा बस्यो भने त ऊ आउँदै आउँदैन ।’ ऊ आउँदैन भन्ने सोचर उसको भने निरास भयो । दुई-चार दिनमा आउँला भन्ने आस गर्नु बाहेक अरु कुनै सान्त्वनाको उपाय भेट्टाइन उसले ।
'भोलिनै जान्छौँ ।' दिदी भन्दै थिइन् ।
दिदी आए पछि 'कहाँ जाने दिदी ?' उसले सोधी ।
'घर जानी नि ।' दिदीले भनिन् ।
'किन र ?' ऊ अचम्म परी ।
'आमा पनि बिरामी छिन् रे । हेर्नी मान्छे चाहिएन ?'
'अनि कहिले आइन्छ त ?'
'अब नआउनी । हामी गाउ ग’सी ह्या नयाँ मान्छे खोजीहाल्छन् । ह्या पनि काम मात्रै धेरै । पैसा नि त्यती नहुनी अब उतै बस्नी, नफर्कनी ।'
उसले अवाक् भएर दिदीको अनुहारमा एकोहोरो हेरिरही । उसले झट्ट सोची 'ऊ भोली पर्सी तिर आयो र मलाई देखेन भने ? लाऽऽ’
'दिदी दुईचार दिन बसेर जाँदा हुन्न ?' उसलाई सोध्न मन लाग्यो तर सोधिन । उसलाई लाग्यो अब आउँदैन ऊ । उसलाई अब सबै सकिएजस्तो लाग्यो । शुन्य । सबै समाप्त । सबै खत्तम । फिल्मको अन्त्यमा लेख्ने ‘द इन्ड’ जस्तो । केवल ब्याकराउण्ड म्यूजिक बाँकी छ उसको छातिमा अनि हल्काफूल्का रिप्लेहरू । अरुसबै सकियो । द इन्ड ।